कहिले आउँदैछ एप्पलको बहुप्रतिक्षित एआर/भीआर हेडसेट ? « Tech News Nepal
कहिले आउँदैछ एप्पलको बहुप्रतिक्षित एआर/भीआर हेडसेट ?
काठमाडौं । सन् २०२० मा नै सार्वजनिक हुने भनिएको एप्पलको भर्चुअल रियालिटी/अगमेन्टेड रियालिटी हेडसेट (भीआर/एआर हेडसेट) सन् २०२१ मा पनि सार्वजनिक हुन सकेन । पछिल्लाे समय एप्पलले आउँदो जुन महिनासम्म यो उत्पादन बजारमा ल्याउने चर्चा गरिएकाे थियो ।
यसअघि एप्पलले विश्वव्यापी डेभलपर कन्फ्रेन्सको अवसर पारी यो उत्पादन सार्वजनिक गर्नसक्ने चर्चा गरिएको थियो ।
यो हेडसेट आफ्नै अपरेटिङ सिस्टममा चल्ने जनाइएको छ । हेडसेटमा एक दर्जनभन्दा बढी क्यामेरा, एटके डिस्प्ले, आई ट्र्याकर लगायतका फिचर हुनसक्छ ।